Ihe Zodiac Horse Horse, Njirimara, Onwe, na Ndakọrịta | Astrology nke Celtic - Ihe Ịrịba Ama Zodiac
Okwu Ime Mmụọ
Diacnyịnya Celtic Zodiac ịrịba ama pụtara, Àgwà, mmadụ, na ndakọrịta
Horse Zodiac Celnyịnya
Nkọwa, Àgwà, mmadụ, na ndakọrịta
Celtic Horse Zodiac ịrịba ama ụbọchị: Julaị 8 - Ọgọst 4
Na Celtic Zodiac Horse na-adọta n'ebe gburugburu onye mmeri nke ndụ. Ndị a bụ ndị ike na-achịkwaghị achịkwa mara ebe ha na-aga na otu ha chọrọ ịnọ ebe ahụ. Ndị na-agba ịnyịnya mara mma, na-azụ ahịa azụmaahịa na mgbe niile n'elu egwuregwu ha mgbe a bịara n'ihe ejiji. Ọ bụrụ na ị dị ebube ma na-eburu gị, ị gaghị apụ n'anya n'etiti ìgwè mmadụ, nke dị mma n'ihi na ị na-enwe ntakịrị ntakịrị mgbukepụ na oge na ntanetị. Nke a abughi ego dika ihe na-eme ka nkpuru obi di nkpuru obi gi mejuo obi uto.
N'ihi na inyinya na-achọ nkwenye ha na-abanyekarị n'ezi ihe. Ọtụtụ oge nke a na - abụ ọrụ onye ndu n'ihi na otuto ndị ahụ na - emetụta gị na ịdị ukwuu. Okwu gị na nguzo gị na-ekwu maka ikike, ntụkwasị obi na ikike ịme ihe na oge. Ndụ bụ agbụrụ gị iji merie, ị na-ezubekwa na n'agbanyeghị ihe mgbochi ọ bụla na-eche gị ihu. Nke a apụtaghị na enyịnya na-enwetakarị mmeri, mana ha agaghị enwe mwute maka enweghị ọrụ.
Site na nwata, Horse na-enwe obi uto na oru n'otu. Ọ bụ ezie na ọ bụ ntakịrị mmụọ mmụọ, uru nke iso ndị ọzọ na-emekọ ngwa ngwa na-egosipụta onwe ya. Ya mere, mgbe ọnọdụ ndị gbakọtara ọnụ na-ebili, Horse na-awụda oge. Cheta, ido onwe gị n'okpuru na-adịchaghị n'ọbara gị. Enwere ihe dị n'ime nke na-achọ ịbụ onye ndu, ebe ị ka nwere ike ịchọta uru ọ bara na onye ọ bụla na-akwado gị.
N'ime ndụ gị niile, a ga-enwe oge mgbe ndị na-agba ịnyịnya agaghị achọ naanị, kama ọ dị mkpa, ka ha na-eje ije n'ilu a 'akụkụ ọhịa.' Ncheta oge ochie ma ọ bụ na-agagharị n'efu ka na-ama jijiji n'ime sel gị. N'oge ndị a, ị ga-enwere onwe gị, nwere ike ịmalite njem na-enweghị usoro ma ọ bụ bido ọrụ nke na-agbanwe ihu nke eziokwu dị ka anyị si mara ya. Mantra nke ịnyịnya bụ 'gaa n'ihu ma ọ bụ laa n'ụlọ.'
Dị ka inyinya, ị na-eme nke ọma na nganga kwesịrị ekwesị. Nke a bụ ebe etiti gị na elekwasị anya, yana ezi ihe kpatara ya. Nyịnya na-ebikarị ụzọ nke na ndị mmadụ agaghị asọpụrụ gị. Nke a dị mma. Ọ dị mma ịmata na na Celtic Zodiac ị bụ ndụ, na-eku ume dynamo.
Keywords ndị ọzọ na-akọwa ụdị ịnyịnya gụnyere ndị na-apụ apụ, ndị na-emesapụ aka, ndị maara ihe, na-eme omume nke onwe ha, na-eme ka mmadụ kwenye, na-eme ihe ngosi, na-egosipụta ma na-akpali echiche. Nke a bụ ezigbo agwa. Ọ bụghị ihe ijuanya na Horse anaghị adịkarị ụtọ.
Ndị na-agba ịnyịnya na-achọ ịdị gara gara. Ọtụtụ na-eme mmemme ahụike ma ọ bụ egwuregwu iji kwado ahụ ahụ dị mma ma dị nsọ. Ihe kpatara nke a bụ okpukpu atọ. Maka otu Horse na-enwe mmasị asọmpi. Nke abuo ichoro ka ahu di gi nma, mana odi ichoro nma. Ebee ka eriri ahụ na-acha anụnụ anụnụ dị?
ise nke iko tarot pụtara
Mgbe ụfọdụ, enyịnya na-abịa dị ka tad mpako, mana nke ahụ abụghị n'ezie. Ee, Horse na-ekwere n'onwe ya ma ọ bụ n'onwe ya kpamkpam. Rarelygaghị ahụ ndị na-agba ịnyịnya nke abụọ na-eche nhọrọ nke aka gị. Agbanyeghị, n'okpuru uwe ahụ na-egbuke egbuke na aji zuru oke, Horsnyịnya bụ agadi dị larịị. Ha na-elekọta ọrụ karịrị nke ha na-ahapụkarị. Horsenyịnya ji obi ya niile na-akpali ma na-eme ịhụnanya. Ndị ahụ na-akpachi anya na ịnyịnya nwere ike ịchọpụta obere nwa nwa nọ ebe ahụ na-echere igwu egwu!
Egwuregwu Celtic na-achị achị site na ọkụ, nke na-amị akụkụ mmadụ n'ezie. Nyịnya nwere ike ịgbaji, mgbe ụfọdụ na-ewe iwe dị ọkụ ma na-efegharị ruo mgbe isi ha jụrụ oyi. Ọkụ na-ekpo ọkụ ma jupụta na agụụ, mana ị ga-ele anya maka n'akụkụ ọzọ nke na-ere ọkụ.
Gwakọta nke a na-emetụta Sun ma na ị nwere oke okpomọkụ. Ike anyanwụ na-arụ ọrụ, na-ada ụda, o yikwara ka ọ dịghị agwụ agwụ. Ndị Inyinya makenyịnya na-enwekarị nne ndị magburu onwe ha, nwee ume na-enye ume ndụ n'ime ha. Mụ nwoke na-abụ ndị nchebe siri ike na ike nke ezinụlọ.
N'ịkọ akụkọ ihe mere eme banyere enyịnya dị mkpa n'ụzọ otu obodo si mepee. Malite na oru ugbo na agha, ma na-aga n'ihu na nyocha, ahia ma mechaa guzobe obodo na obodo ohuru. Ọtụtụ ezinụlọ ndị Celtic nakweere Horse dị ka ihe nnọchianya dị oke mkpa maka ọrụ ha niile. Ndị Celts na-asọpụrụ Horsnyịnya dịka onye mmeri, ọ bụrụhaala na ị na-eme otu ihe ahụ maka Horse na ndụ gị, ha ga-enwe obi ụtọ.
Zodiac ịrịba ama Ndenye Links
Laghachi na ihe niile Celtic Zodiac ịrịba ama & Celtic Astrology
Laghachi na ihe niile Ihe ịrịba ama Zodiac
Mụta ihe niile banyere gị Ihe omuma Zodiac nke Western
Gụọ ihe niile gbasara gị Ihe akara Zodiac nke China
Na-achọ ịhụnanya? Nyochaa nke gị Ndakọrịta Zodiac
Nwere ụmụaka? Chọpụta Ihe omuma Zodiac maka umuaka
Soro ochi gi Ihe ngosi Zodiac nke China
nwa agboghobia sagittarius nwoke n’akwa
gemini nwoke libra nwanyi di na akwa
mbara ala ole ka anyị nwere ugbu a
nwoke cancer nwere ịhụnanya n'ebe nwanyị sagittarius nọ